IVimeo izuza Abelana Ngemakethe Yevidiyo: Traffic Up 269% | Martech Zone
Muva nje, bengilokhu ngenza ucwaningo oluningi kuvidiyo yamakhasimende ami. Ividiyo iba yinto enkulu kulokho oku-inthanethi; empeleni, kunethuba elihle lokuthi isiza sakho sizokweqiwa ngokuphelele ngamaphesenti amahle ezivakashi ngaphandle unikeza ividiyo. Amafoni amasha smart nawo alungiselelwe ividiyo nokubukwa kuyamemeza.
I-Youtube isivele iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu kwi-Intanethi. Kepha amanye amapulatifomu wevidiyo enza kahle impela, ngokukhula kwamadijithi aphindwe kabili ngonyaka wethrafikhi unyaka. Nokho, kuze kube manje Vimeo wenze inqubekela phambili enkulu… ukudlula izimbangi ezimbili ezinkulu kakhulu - I-Metacafe futhi DailyMotion. Nazi izibalo zakamuva ezivela ku- Ukuncintisana:
Ividiyo nayo iba yinto enezinjini zokusesha. I-Google ivame ukufafaza imiphumela yakamuva yevidiyo, kanye nezithombe, ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha ejwayelekile. Amapulatifomu aya ngokuvumelana nezimo… Ukuhlolwa kwakamuva kwe-Youtube kuvunyelwe amakhasi okufika ngokwezifiso nokuxhumana komsebenzisi!
Ngaphandle kwamakhono we-SEO, ividiyo yinhle kakhulu ukudlula izizathu ezimbili zokumaketha:
Amandla evidiyo okuchaza izinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu noma ukuxhumana kalula. Kungani uzama ukuchaza ngezithombe nangemibhalo lapho ungenza ividiyo yesekhondi engama-30 eyenza kube nencazelo engenaphutha.
Amandla wevidiyo wokuxhuma uqobo nangempumelelo nezithameli. Uma isithombe sibiza amagama ayinkulungwane, ividiyo ibiza izigidi.
Nginesiqiniseko sokuthi izindleko eziphansi zikaVimeo, ikhwalithi ephezulu kanye neminikelo enamandla kusheshisa ukukhula kwayo. Ukubamba ibhizinisi nge $ 59 ngonyaka nge-5Gb yokulayishiwe kuvunyelwe ngesonto. Isayithi livumela ukudlala kwencazelo ephezulu ngokukhulu analytics namakhasi wesiteshi aklanywe kahle. Sisanda kufaka i- DK New Media Isiteshi sevidiyo lokho kubukhali impela. Futhi zivumela izixhumanisi ekugcineni kwamavidiyo akho nokususwa kophawu lwazo lapho kuzishumeka.
I-goliath iyaqhubeka nokuba yi-YouTube… ngakho-ke uma uzama ukufinyelela abantu abaningi, udinga ukudlala egcekeni labo. Musa ukubala abanye ngaphandle komdlalo okwamanje, noma kunjalo! Kunamathuba amaningi.
Tags: Accentureincazelo yebhulogikulethechofoza lapha ukuze ulandeukubalwa kwabantu be-facebookSiteenobunganeilaptop yevidiyoOkubukwayo
Ividiyo: Ukubuka kuqala kokugcina kwe-Microsoft Windows Phone 7